Sarri oo ka hadlay guuldaradii niyad jabka ahayd ay kala kulmeen kooxda Manchester United – Gool FM
(Chelsea) 19 Feb 2019. Tababaraha kooxda Chelsea ee Maurizio Sarri ayaa sheegay inuusan kalsooni ku qabin in ciyaartoyda si buuxda loo taageeri doono, kadib guuldaradii 2-0 ahayd ee xalay kaga soo gaartay Manchester United kulanka wareega 5-aad ee koobka FA Cup.
Macalinka reer Talyaani ayaa sida caadiga ah kasoo muuqday shir jaraa’id kadib marka ay ciyaarta soo idlaatay, wuxuuna ka hadlay dhowr arimood ee quseeya kooxdiisa,
“Waxaan qabaa inaan nasiib laheyn, sababtoo ah qeybtii hore waan ka fiicneyn iyaga, laakiin ugu dambeyntii waxaan ku guuldareysanay 2-0”.
“Qeybtii labaad ee ciyaarta xaalada aad ayay u adkeyd, sababtoo ah waxay ahaayeen kuwo aad u awood badan jir ahaan, waxayna ciyaareen daafaca dambe”.
“Qeybta labaad ee ciyaarta si fiican ayaan u ciyaarnay, balse waxaa loo baahnaa in xoogaa si bahalnimo ah aan u dagaalano, waxaan ku ciyaarnay 78 kubadadood xeradooda ganaaxa, balse iyagu waxay sameeyeen 16 jeer oo kaliya”.
“Kaliya waxaan ka walwalsanahay natiijooyinka kooxda, ee kama walwalsani jamaahiirta, waan fahamsanahay sida ay xaalada tahay, sababtoo ah natiijooyinka ma fiicna”.
Ugu dambeyn Maurizio Sarri ayaa wuxuu hadalkiisa ku soo xiray hadii uu ka walwalsan yahay iyo hadii kale mustaqbalkiisa kooxda Chelsea kadib guuldarada Manchester United wuxuuna yiri: “Kama walwalayo mustaqbalkeyga kooxda”.